Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ Kuwait » Kuwait Na-amachibido Citizmụ amaala niile Amachibidoro Iwu Site na Njem Ofesi
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Akwụkwọ akụkọ Kuwait • News • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Kuwait amachibidoro ụmụ amaala niile na-enwetaghị ọgwụ mgbochi njem site na mba ọzọ
Ndị ọchịchị kwupụtara mmachibido iwu nke njem mba ofesi maka ụmụ amaala Kuwaiti niile na -anaghị agba ọgwụ mgbochi.
Naanị ụmụ amaala Kuwait gbara ọgwụ mgbochi nyere ohere ịga mba ofesi.
Mmachibido njem njem ga -amalite na Ọgọst 1.
A gụpụrụ ụmụaka na -erubeghị afọ 16 n'iwu ọhụrụ.
Ndị ọchịchị Kuwait kwupụtara na ọ bụ naanị ụmụ amaala Kuwaiti gbara ọgwụ mgbochi ka a ga -ahapụ ka ha gaa mba ọzọ, na -agbadata nnukwu akụkụ nke nde mmadụ 4.2 nke mba ahụ.
Ndị ọrụ gọọmentị mba Gulf na -ekwupụta mmachibido iwu nke njem mba ofesi maka ụmụ amaala a na -agbabeghị ọgwụ. Malite na Ọgọstụ 1, ọ bụ naanị ndị nwere ọgwụ mgbochi ka a ga -ahapụ ka ha gaa njem mba ofesi.
Agbanyeghị, ụmụaka na -erubeghị afọ 16, ndị nwere ọnọdụ ahụike na -egbochi ịgba ọgwụ mgbochi, yana ụmụ nwanyị dị ime ga -ahapụ iwu ọhụrụ a ga -ahapụ ha ka ha mee njem ma ọ bụrụ na ha nweta asambodo kwesịrị ekwesị site na ministri ahụike mba ahụ.
Ntugharị a na -eme ka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị Kuwait nọrọ n'okpuru mmachibido njem njem mba ofesi. Dị ka data ọhụrụ dị, Kuwait enyela ihe karịrị nde 2.3 ọgwụ mgbochi COVID-19, yana ihe dị ka otu nde mmadụ ruo ugbu a-ihe karịrị 22% nke ndị mmadụ-na-enweta mgbọ abụọ.
Ọ bụ ezie na ọkwa amachaghị nke ọma n'okwu a, o doro anya na ọ na -egosi na ọ bụ naanị ndị nwere ọgwụ mgbochi zuru oke ka a ga -ahapụ ka ha mee njem mgbe nha ga -amalite n'ọnwa na -abịa.
Kemgbe mmalite oria ojoo a, Kuwait edebanyela ikpe 394,000 COVID-19, yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ 2,300 nwụrụ ọrịa ahụ.